विदेशी चिनी उपभोग गर्न उपभोक्ता बाध्य | गृहपृष्ठ
Home समाचार विदेशी चिनी उपभोग गर्न उपभोक्ता बाध्य
समाचार 24 views
बारा (अस) । स्वदेशीभन्दा आयातित चिनीको मूल्य कम हुँदा बाराका उपभोक्ता विदेशी चिनी प्रयोग गर्दै आएका छन् । चिनी उत्पादनका लागि कतिपय कच्चापदार्थ स्वदेशमै उत्पादन भए तापनि दक्ष जनशक्ति, केमिकल्सलगायतको व्यवस्था नभएकोले स्वदेशी चिनीको उत्पादन लागत आयातित चिनीको भन्दा बढी हुने गरेको बताइएको छ ।
चिनी उत्पादनका लागि आवश्यक कच्चापदार्थ महँगोमा खरीद गर्नुपर्ने बाध्यता छ । साथै, चिनी उत्पादनका लागि केमिकल, उपकरण र दक्ष जनशक्तिसमेत विदेशबाट आयात गरिन्छ । यसले अन्तरराष्ट्रिय बजारको तुलनामा यहाँ उत्पादित चिनीको मूल्य स्वतः बढ्ने रिलायन्स चिनी मिलका प्रबन्धक मनोज पोद्दारले बताए ।
उखुखेती गरी समयमा मूल्य निर्धारण हुन नसक्दा उधारोमै विक्री गर्नुपर्ने अवस्था छ । यस कारण खेती विस्तार गर्नुभन्दा घटाउनेतर्फ लागेको बाराका उखु किसान बताउँछन् । सरकारले कृषिक्षेत्रको दिगो विकाससँगै कृषकको आर्थिक अवस्था उकास्न विभिन्न उपकरण तथा बीउबिजनमा समेत अनुदान दिँदै आएको जिल्ला कृषि विकास कार्यालय बाराका प्रमुख शिवरतन साहले बताए ।
बाराको सदरमुकाम कलैया बजारमा साना ठूला गरी सयौंको सङ्ख्यामा होलसेल तथा थोक पसल छन् । तर, ती पसलमा स्वदेशी नभई भारतबाट आयातित चिनी मात्र विक्री हुने गरेको स्थानीय उपभोक्ता मदन पटेलले बताए । उनका अनुसार बजारमा स्वदेशी चिनीको मूल्य प्रतिकिलो रू. ८८ पर्दछ भने भारतबाट आयातित चिनी प्रतिकिलो रू. ७५ मा विक्री हुने छ ।